I-Casa del Río Las Luciérnagas kwaye ikufutshane kakhulu nolwandle - I-Airbnb
I-Casa del Río Las Luciérnagas kwaye ikufutshane kakhulu nolwandle
ILa casa del Río, ebekwe kwindawo yokugcina iLos Tuxtlas, ipropathi ehlanjwe ngamanzi ekristale omlambo kwaye ikufuphi kakhulu nolwandle.
I-BBQ egadini, ikhitshi enezixhobo, amagumbi okulala ama-2 anegumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala elineebhedi zesofa, ithafa elikhulu kakhulu elinegumbi lokutyela kunye ne-hammocks, i-2,000 m2 yegadi, ejikelezwe zizityalo ezishinyeneyo kwaye kufutshane nolwandle, apho uya kuba nokufikelela kwindawo yolwandle. kwiindawo eziqhelekileyo Hotel Boutique "Casa de las Olas" (mitha ngaphantsi kwama-400 kude) kwaye ukonwabela ufikelelo bay kwihotele leyo.
La Casa del Río Indlu ilizwe ulibaleke, wamitha zokusabela zendalo kude umsindo befuna izixeko kunye nobugcisa, ibekwe embilinini Tuxtlas Biosphere Reserve, imizuzu eli-15 ukusuka Roca Partida, South evela kurhulumente ye Veracruz, oko yipropathi ehlanjwe ngamanzi ayikristale yomnye wemilambo yalo mmandla, ejikelezwe luhlaza oluchumileyo kwaye ikufuphi kakhulu nolwandle.
La Casa del Rio yindawo ekhethekileyo, cwaka apho indalo idibana, apho ungabona ebusuku ezimnyama iinkwenkwezi kunye kwenkanyezi, ukulala kunye lullaby kwamanzi kunye bavuke kunye nokucula iintaka, khipha, ukuphembelela, iibhetri kwentlawulo nodibaniso kwakhona .
Sine-barbecue enkulu egadini, ikhitshi elixhotyiswe, amagumbi okulala ama-2 anegumbi lokuhlambela labucala, igumbi lokuhlala elinebhedi yesofa, ithafa elikhulu kakhulu elinegumbi lokutyela kunye ne-hammock, apho unokonwabela iimvakwemini ezingalibalekiyo kunye negadi yayo engaphezulu kwe-2,000 yeemitha zegadi, Amngqonga uhlaza kunye nokuba kufutshane elwandle, apho uya kukwazi ukufikelela kwiindawo ezifana ngazo Boutique Hotel "Casa de las Olas" (mitha ngaphantsi kwama-400 kude) kwaye ukonwabela ufikelelo bay ehotele.
Luluntu oluncinci, olukhuselekileyo, apho unokuthenga kuphela izinto ezisisiseko
Balungile abantu, balala kwangoko
Kukho iingxangxasi ezininzi, imilambo kunye namalwandle okutyelela
Ndicele ukuba ndikunike isikhokelo esipheleleyo kunye noqhagamshelwano lwemisebenzi